Blog - Shanghai T&Y Hardware Maindasitiri.
Ungasvika sei kubva kushanghai PVG kuenda kuHangzhou?
Vatengi veAustria vanoshanyira kuzokurukura silo bolts odha
Vhiki rapfuura, vatengi veAustria vakashanya uye takakurukura nezvechirongwa chitsva, ivo vanoda kutenga mabhaudhi evhu neepurasitiki tsvuku, izvo zvinhu Class8.8, kurapwa kwepamusoro iHDG, saizi ndeye M12 * 30. Ndawedzera iwo madhirowa, iwe unogona ona madhirowa anotumira nevatengi vedu.Ichi chigadzirwa chenguva dzose kwatiri uye isu takanaka pakuita izvi, Tinofara kwazvo kutaura nezve kubatana uku kwasvika chinangwa, Vatengi vanovimbisa kutipa odha mushure mekudzokera kumba.
Maitiro Ekusarudza iyo mbishi zvinhu zve Fasteners
Ndeipi hwaro hwekusarudzwa kweFoldeners, inyaya yakaoma, T&Y hardware yekuyeuchidza kubva pazvinhu zvishanu.
1, asiri-akajairwa mabhaudhi uye nzungu zvinhu zviri mumakanika zvivakwa, kunyanya simba zvinodiwa;
2, iyo yekushanda mamiriro eiyo corrosion kuramba kwezvinhu zvemukati zvekuda;
3, iyo inoshanda tembiricha pane kupisa kupisa (yakasimba-tembiricha simba, oxidation kuramba) zvinodiwa;
Bolts zvakajairika kuomarara indekisi
Kuoma kweBolt kunoratidza kugona kwechinhu kudzivisa kupindirwa kwechinhu chakaoma mukati mayo. Icho chimwe cheakakosha mashandiro ekuratidzira esimbi zvinhu. Iyo yakakwira iyo yakawandisa kuomarara, zvirinani kupfeka kuramba. Inowanzo shandiswa kuomarara index Brinell kuomarara, Rockwell kuomarara uye Vickers kuomarara.
Brinell kuomarara (HB) kune imwe mutoro (kazhinji 3000kg) kune imwe saizi (dhayamita inowanzo kuve 10mm) yakaoma simbi bhora yakamanikidzwa kupinda pamusoro pechinhu, kuchengetedza nguva, kurongedza, mutoro uye nzvimbo yayo yekumisikidza reshiyo,
Bolt yekuongorora nzira
Bolts: zvemuchina zvikamu, zvine cylindrical nzungu dzakakoshwa sunga. Rudzi rwekutsanya runosanganisira musoro uye sikuruu (cylindrical body ine yekunze shinda) inofanirwa kuiswa nati yekumisikidza kubatana kwezvikamu zviviri nepakati-maburi. Rudzi urwu rwekubatanidza runonzi bolting. Senge iyo nati kubva kubhaudhi pane inoyerera pasi, uye inogona kuita kuti zvikamu zviviri zviparadzaniswe, saka bhaudhi kubatana ndiko kubvisika kubatana. Kuongorora kweBolt kunogona kukamurwa kuita maviri marudzi eyakagadzirwa nemuchina, inotevera Chinese yekumisikidza network iwe yakateedzana zvakadzama
Huru hunhu hwekupisa kwakakurisa mabhaudhi uye nzungu
Zvakajairika mhando Kupisa kwakakurudzira zvakasungirirwa, Nhasi, Injiniya wehunyanzvi Andrew kubva ku shanghai T&Y Hardware (www.tyfastener.com) achigovana zvimwe zviitiko: kwakakurudzira emagetsi, hupfu kupinda mukati mezinc, michina yakakosheswa uye dhi rinopisa kwakakurudzira ina. HDG inosunga zvakanyanya pane zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa muitiro wehunyanzvi maitiro ekuonekwa, zvobva zvazvionera pachayo chii?
1 kuvimbika: pakati pezinc kupfeka uye simbi simbi yekuonana, inova chikamu chechitarisiko chesimbi,
Kukoka National Industrial Fastener & Mill Supply Expo kubva kuT & Y Hardware
Anodiwa Anokosha Mutengi
Isu tinokukoka nemoyo wese iwe nevamiriri vekambani yako kuti mushanyire dumba redu pa2017
National Industrial Fastener & Mill Supply Expo kubva Gumiguru 18 - 19, 2017
Zvingava mufaro mukuru kusangana newe pashoo.We tinotarisira kumisikidza refu-bhizinesi hukama nekambani yako mune ramangwana.
Zvipfigiso: zvemuchina zvikamu, zvakavharirwa zvakasungwa zvakasungwa zvine nzungu.Iye yekumisikidza ine zvikamu zviviri zvemusoro uye sikuru (iyo cylinder ine yekunze sikuru) ichave yakaiswa neiyo nati yekusimbisa kubatana kwezvikamu zviviri nepasiti gomba. fomu yekubatanidza inonzi yakasunganidzwa kubatana Kana iwe ukamenya iyo nati kubva kubhaudhi, unogona kupatsanura zvikamu zviviri, saka bhaudhi yekubatanidza inobvisika kubatana. Kuonekwa kweBolt kunogona kugoverwa mumhando mbiri: chakagadzirwa nemuchina.
Iyo Nzira Yekuverenga Tensile Simba reHexagon Socket Musoro Bolts
Simba ndiko kutakura chinzvimbo pachikamu chimwe nechimwe, chiratidzo.
Fomura: Kubereka kugona = simba x nzvimbo;
Yakabvarurwa bhaudhi, M24 bhaudhi muchinjikwa-chikamu chikamu haisi iyo dhayamita yenzvimbo yakatenderera ye24, asi 353 mm2, inonzi nzvimbo inoshanda.
T & Y Hardware Fasteners Ratidza muLas Vegas muna Gumiguru-2017
Tiri kupera muna 18-19 th Oct fasteners show muLas Vegas, USA, Chaizvo Kubudirira kukuru, Tinotenda musika wedu weAmerica uchakura nekukura. Iye zvino kugovana iwe imwe pic yekuratidzira.
Wedu Boss Jane, pamwe naAndy, USA mumiriri wekutengesa Uye Kugadzirisa Boss Mr Yan muBooth medu pamwe nevatengi vedu
musha pashure 1 2 NextLast - Total 19 1 anonyora Current peji / Total 2 10 página